Masaka Gaafataa - Maqbiroowwan
Maqbiroowwan gara maqaalee dirreetti moggaasa. Maqbiroowwan filannoo dha, fi maqaalee beekkamoo hedduu kennuu, kan iddoo dirree bakka bu'anii argamuu danda'an. Fakkeenyaaf, maqbiroon dirreen gabateewwan adda addaa maqaa walfakkatu qabaataniif fayyada.
Maqaa dirreef maqbiroo galchi.
Masaka Gaafataa - Ilaalcha gubbaa
Title is: Masaka Gaafataa - Maqbiroowwan